Home /Blog/Akhriso Muxuu yahay Nudaamka Faderaalka ee Soomaaliya
1. Waxaa samayn kara waddammo dhowr ah oo madax bannaan oo ah kuwo caalamku aqoonsan yahay ah, kuwaa soo ka tanaasula awoodahooda qaar ka mid ah si ay u helaan dowlad dhexe oo cusub ee iyaga ka dhaxaysa. Markii ay isku darsamaan waxaa samaysmaya waddan weyn oo xoog badan, iyagana maamul hoosaad iyo mid kasta magac u gaar ah ayaa la siiyaa. Sidaas waxaa u samaysmay dalka Maraykanka 1789.
2. Fadaraalku wuxuu kaloo ku yimaadaa markii waddan nidaamka unitaryga ah uu u kala burburo tiro maamul goboleedyo ah, kuwaa soo marka dambe iyagu isuyimaada kuna heshiiya nidaamka fadaraalka ah. Sidaas markii ay dhacdo waxaa dhasha dal fadaraal ah. Sidaasna waxaa ku samaysmay dalka Canada 1867.
1. Awoodaha oo la Qabsado:
2. Dastuur adag oo qoran:
3. Garsoor Awood Badan oo Madax bannaan:
4. Baarlamaan laba gole ka kooban:
5. Madax Bannaanidii hore ay u Haysteen meeshey ka baxaysaa:
6. Fadareeshanka ama fadaraalka waa la sameeyaa:
7. Midow Rasmi ah oo Joogto ah:
1. Umidowbid si nabad ah oo ikhtiyaar ah samaynta dal xoog leh derti:
2. Horumarinta Ilaha Dhaqaalaha:
3. Isu keenid midnima qaran iyo xukun hoosaad:
Nidaamka fadaraalka ah wuxuu isu keenay midnimo qaran iyo xukun hoosaad. Sidaas darteed wuxuu aad ugu haboon ama ugu fiican yahay dalalka waaweyn sida Mareykanka, Indiya iwm. Gobollada kala duwan ee dalalka noocaan oo kale ah, waxay si weyn ugu kala duwan yihiin luuqadda, dhaqanka, diinta, iwm., waxayna leeyihiin baahiyo kala duwan oo dhaqaale iyo
siyaasad ah. Nidaaamka fadaraalku dowlad goboleedyada wuxuu siinayaa xukun hoosaad, dowlad weyn oo fadaraal ah oo gobolada ka dhaxaysana way jireysaa. Nidaamkaani wuxuu iswaafa jiyey dowlad dhexe ee qaran iyo maamul goboleedyo, gobol walbaa arrimihiisa hoose ku maamusho, raalina uu ku yahay.
4. Shaqadoo qaybsan:
5. Jawi Dimoqraadiyadeed:
6. Fikrad ama aragti ah caalamka oo dhan fadareeshan inuu noqdo;
7. Ku Fiicnaansho aad ah oo bulshada casriga ah:
1. Siyaasadda Arrimaha Dibadda waa mid jilicsan:
2. Jileec Arrimaha Gudaha ah:
3. Dastuur Adag:
4. Kharashaad Badan:
5. Waqtiyada oo dhan awooduhu si sax ah kuwo loo qaybsaday ma noqon karaan:
Awoodaha oo loo qaybiyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taa soo sal u ah fadareeshanka ma ahaan karro mar walba qaybsi sax ah. Si kastoo, qorshaha hadda ee qaybsiga awooduhu uu u yahay mid sax ah oo dhammaystiran, ma ahaan karo mid saadaaliya baahiyaha, dalabyada, fikradaha iyo isbeddelada mustaqbalka. Wax hadda loo arko in ay muhiim u tahay gobol ama muhiimideedu tahay heer gobol baa barito waxay
yeelaneysaa muhiimad heer qaran. Laakiin dowladda qaranku ma heli karto awood cusub iyadoon dastuurka wax laga beddelin ama garsoorku uusan fasirin. Dastuurka si dhaqsa ah wax loogama beddeli karo sababtoo ah wuu adag yahay, fasiraadda garsoorkuna waa mid gaabis iyo hawl iska daba wareegeysa ah.
6. Khatar Kalago: